Culture | INSTITUT FRANÇAIS de BIRMANIE
(English) Join Us!
ပြင်သစ်စာသင်ရန်အကြောင်း ၅ ချက်
မြန်မာစာသင်ရန်အကြောင်း ၅ ချက်
FRENCH (LOVE) FRIDAY #15 – Hip Hop after all
Example: Sorry, this entry is only available in English.
နိုင်ငံတကာ Jazz တေးဂီတ
နိုင်ငံတကာ Jazz တေးဂီတ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ Jazz Music ဂီတပွဲတော်သို့ ဂီတကိုခံစားနားထောင်ပြီး အတူကခုန်ပျော်မြူးရန် အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသည်။ ဆွိဒင်နိုင်ငံမှ ဆုရ လူငယ် Jazz ဂီတပညာရှင် Susanna Risberg (http://www.susannarisberg.com/) နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဂီတပညာရှင်များ 88 Degree Band, Bamboo Trio တေးဂီတအဖွဲ့များလည်းအတူ ပါဝင်တင်ဆက်ပါမည်။ နေရာ။ ။ French Institute၊ ပြည်လမ်း အချိန်။ ။ ၃၀ ရက်နေ့ (စနေနေ့)၊ ညနေ ၇ နာရီ သင်၏ သူငယ်ချင်းများကို ထပ်ဆင့်ဖိတ်ခေါ်နိုင်ရန် ဖိတ်စာကို ဤမေးလ်နှင့်ပေးပို့ထားပါသည်။ အက၀တ်စုံ၊...
LA FRENCH TOUCH FESTIVAL